सन्दीप लामिछानेको आईपीएलमा खेल के हुँदैछ ? | Sindhuli Saugat
सन्दीप लामिछानेको आईपीएलमा खेल के हुँदैछ ?
भारतमा भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटको बुधबार रातिको खेलमा नेपालबाट पहिलो पटक सहभागीता जनाउने मौका पाएका स्पीन बलर सन्दीप लामिछानेको टिम दिल्ली डेयर डेभिल्सले खेल्दैछ । खेल राजस्थान रोयल्ससंग उसकै मैदान जयपुरमा हुँदैछ ।
दुवै टिमले दोस्रो खेल खेल्न लागेका हुन् । दुवै टिमले पहिलो खेल हारेका थिए । दिल्लीले किंगस ११ पंजाबसंग र राजस्थानले सनराइजर्स हैदराबादसंग हार बेहोरेको थियो । यो खेल दुवै टिमका लागि जित्नुपर्ने महत्वपूर्ण खेल छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ खेलाडीले अवसर कत्तिको पाउँछन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सन्दीपले यो खेलमा पनि खेल्न पाउने सम्भावना कम छ । किनकि दिल्ली दवावमा छ । खेल नेपाली समय अनुसार राति ८ः१५ बजे सुरु हुनेछ।
लिगमा अहिलेसम्म दुई वर्षपछि लिगमा फर्किएको महेन्द्र सिंह धोनी कप्तान रहेको चेन्नई सुपर किंगस २ खेलबाट ४ अंकसहित शिर्ष स्थानमा छ । हैदराबाद र पञ्जावले एक एक खेलबाट जित हासिल गरेका छन् । कोलकाताले दुई खेलमा एकमा जित निकालेको छ । मुम्बई, दिल्ली, बैंगलोर र राजस्थान अंकविहिन छन् ।
पछिल्लाे - जिल्लाको विकास भएमात्र होटल व्यवसाय फस्टाउछ : गजुरेल
अघिल्लाे - बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडको कर्मचारी आबश्यक्ताको सूचना